Bildspel: Skydd mot graviditet - somaliska
Waxyaalaha ugu badan ee kaa ilaalinaaya uurka waxa ku jira hormoono. Waa maadad ku jirta jidhka taas oo saameysa waxyaalaha sida ugxanta iyo caadada. Hormoonada kaa ilaalinaaya uurku waxay kaa dhigayaan qof aan qaadin uur.
Kondhom, femidom iyo Gariiradda birta kobarta ayaa ah waxyaalaha la iskaga ilaaliyo uurka ee ay ku jiraan hormoonadu.
Kondhom iyo femidom sidoo kale waxay kaa ilaalinayaan cudurada xubnaha taranka.Waxyaalaha kale ee la iskaga ilaaliya uurku kaama ilaalinayaan cudurada xubnaha taranka.
Kondhomka waxa laga sameeyey cinjir khafiif ah. Waxaad galineysaa guska haddii aad galmo galayso. Markaas oo aanay xawadu soo galeyn siilka. Waxa muhiim ah in kondhoomka la xidhnaado xiliga galmad oo dhan. Kondhomka wax laga soo iibsan karaa farmasiiga, kioska iyo dukaanka cuntada iyo internedka.
Kondhomku waa ilaalo ay wiilashu xidhan karaan. Waxyaalaha kale ee la iskaga ilaaliyo uurka waxa loo sameeyey gabdhaha. Sawirka ayaa kondhoomka leeyahay warqad ku duuban.
Kiniinka kahortagga uurka
Kiniinka kahortagga uurka waa kiniin aad cuneyso. Qaarkood ayaad maalinwalba cuneysaa. Kuwa kale waxaad qaadanysaa 21 ilaa 24 maalmood. Kadibna waxaad joojineysaa afar ilaa todoba maalmood. Markaas oo aad heli doontaa caadada. Kadiba waxaad dib u bilaabi doontaa Kiniinka kahortagga uurka oo kale.
Waxaad u baahn tahay inaad la kulanto dhakhtar ama umuliso si laguu siiyo kiniinka kahortagga uurka. Taas waxaad tusaale ahaan ka sameyn kartaa ungdomsmottagning ama xarunta qaabilaad umulisada.
Usha hormoonka kahortagga uurka
Usha hormoonka kahortagga uurka waxa laga sameeyay balastig yar oo leeg kabriidka. Waxa la galineyaa maqaarka hoostiisa ee cududaada. Qof umuliso ama dhakhtar ah ayaa galinaaya. Marka hore gacanta ayaa lagaa suuxin.
Usha hormoonka kahortagga uurka lama arki karo. Usha hormoonka kahortagga uurka waxa uu ku jiri karaa ilaa saddex sanno.
Kiniinka degdega ah ee hortagga uurka
Kiniinka kahortagga uurka waxa weeye kiniin aad qaadan karto markaad galmo aanad is ilaalin sameyso, tusaale ahaan haddii aad iska ilowdeen inaad is ilaalisaan. Markaas ayaa khatarta inaad uur aad qaado dhinmeysaa. Kiniinka waa in la qaato sida ugu dhakhsaha badan kadib marka galmo aan la is ilaalin la sameeyo. Qaarkood waxa la qaataa saddex maalmood gudahood, iyadoo kuwa kalena la qaato shan maalmood gudahood. Marba marka ka horeeya ee aad qaadato kiniinka uurka kahortagga ayay khtarta in uur la qaadaa ka sii yaraan kartaa.
Waxaad kiniinka uurka joojiya ee dedega ah ka heli kartaa farmasiiga. Qaar badan oo Ungdomsmottagningar ayaad ka heli kartaa kiniinka uurka kahortagga ee degdega oo bilaash ah.
Kiniinka yaryar ee kahortagga uurka (Minipiller)
Kiniinka yaryar ee kahortagga uurku waxay u eegyihiin kiniinka kahortagga uurka. Waxaad kiniinka cuneysaa maalin walba iyadoo aanad joojineyn. Waxaad u baahn tahay inaad la kulanto dhakhtar ama umuliso si laguu siiyo kiniinka yaryar ee kahortagga uurka.
Giraanta hormoonka kahortagga uurka
Giraanta hormoonka kahortagga uurka dhererkeedu waa dhowr sentimitir iyadoo laga sameeyey balastig. Usha dhexe ayuu ku jiraa hormoon. Giraanta ayaa umuliso ama dhakhtar uu galinayaa ilmo galeenka. Giraanta hormoonka kahortagga uurka waxa uu ku jiri karaa saddex ilaa shan sanno.
Giraankta birta kobarta
Giraankta birta kobarta wa laga sameeyey balastiga. Waxa dhexdeeda lagu duubey bir kobar ah oo khafiif ah. Giraantu waxa saameysaa ilmo galeenka iyadoo ka hor istaagta ubxantu inay bacrinto. Iyada ayaa umuliso ama dhakhtar uu galinayaa ilmo galeenka. Giraanta waxa ay ku jiri kartaa shan sanno.
Fargalka kahortagga uurka
Fargalka kahortagga uurka waxa laga sameeyey balastig khafiif ah oo qiyaas ahaan ilaa shan centimitir ah. Waxaa inaad la kulanto dhakhtar ama umuliso si laguu siiyo balastarka kahortagga uurka. Fargalka ayaad adigu galineysaa siilka.
Fargalka kahortagga uurka ayaa ku jiri karra ilaa saddex todobaad. Ma dareemaysid inuu halkaas ku jiro. Markaas kadib ayaad ka saareysaa. Markaas oo aad heli doontaa caadada. Hal todobaad kadib ayaad galineysaa Fargalka kahortagga uurka cusub.
Waxa femidom laga sameeyey balastiga. Waxaad galineysaa siilka marka aad galmo sameynayso. Labada afba waxa ku yaala ka sameysan balastig, taas oo keenaysa inay ku sii jirto.
Xawadu waxay ku dhacaysaa femidomen markaad galmooneyso. Si ay si wanaagsan kuugu ilaaliso, ayay muhiim tahay inay ku jirto dhamaan xiliga la sameynaayo galmada.
Femidomer wax laga soo iibsan karaa internedka.
Balastarka kahortagga uurka
Balastarka kahortagga uurka waxaad ku dhajineysaa maqaarka.
Waxaa inaad la kulanto dhakhtar ama umuliso si laguu siiyo balastarka kahortagga uurka. Waxaad adigu balastarka ku dhajineysaa maqaarka. Balastarku waa inuu ku dhegganaado hal todobaad, kadibna waxaad ku badaleysaa mid cusub. Saddex todobaad kadib waa inaad ahaato balaster la'aan. Markaas oo aad heli doontaa caadada.
RFSU: Ka hortagga uurka